Fiberglass Roller inopofekedza Machira vagadziri & vanotengesa - China Fiberglass Roller inopofumadza Machira Fekitori
Double Roller inopofumadza Washington City Offices Blackout Mucheka
Iyo fiberglass nhema nhema jira inogadzirwa ne40% fiberglass uye 60% PVC kuburikidza neakasarudzika maitiro. Iyo haina adsorb solid solid in the air uye haina kuomerera kuguruva, iyo inogona kunyatso deredza huwandu hwehuruva. Pamusoro pezvo Iyo yakasarudzika mamineral uye haipe hutachiona hwekukura nharaunda. Hutachiona haugone kubereka uye jira harizove rakaumbwa. Inoshandiswa zvakanyanya muhupenyu hwedu. Semuenzaniso, chivakwa cheveruzhinji (jimunasiyamu, horo yemitambo, nhandare yendege, nzvimbo yekuratidzira), chivakwa chehofisi, hotera (resitorendi, imba yevaeni, jimi, imba yekusangana) uye imba (yekurara, yekudzidzira, imba yekutandarira, imba yekugezera, kicheni, sun room , mhanza).
Hupamhi hwehupamhi hwatinoita i3m. Uye iyo ukobvu inenge 0.38mm. Kureba kwe fiberglass nhema kudzima jira ndeye 30mper roll. Imwe yega roll yakaputirwa mune yakasimba pepa chubhu.
Eco-inoshamwaridzika inorwisa mabhakitiriya kudzima magetsi fiberglass jira reRoller Blinds
Mucheka wekusviba fiberglass wakagadzirwa ne40% fiberglass uye 60% PVC kuburikidza neakakosha maitiro. Iyo yemahara yesimbi inorema uye zvinhu zvinokuvadza, yakachengeteka uye eco-inoshamwaridzika, hapana kunhuwa kunoshamisa, hakuna kukuvadza kumuviri wemunhu, kugadzikana kwakanyanya, kwakanaka uye kwakanaka, uye kuenderana kwemavara kwakakodzerawo kushongedzwa kwazvino. Inoshandiswa zvakanyanya kunzvimbo dzakasiyana, senge hofisi, hotera, maresitorendi uye imba.
Kureba kwesimbi yakasviba fiberglass machira ndeye 30m pane roll. Imwe yega roll yakaputirwa mune yakasimba pepa chubhu. Yemhando bvunzo inofanira kuitwa isati yatumirwa.
Eco-inoshamwaridzika Fiberglass Mucheka 100% Kudzima magetsi Kweimba
Mucheka wekusviba fiberglass wakagadzirwa ne40% fiberglass uye 60% PVC kuburikidza neakakosha maitiro. Iyo inopokana neakasiyana makemikari ngura senge acid uye alkali; pamwe nekureruka kukwegura kuramba uye nemamiriro ekunze kusagadzikana; isina-hygroscopic, hydrophobic uye inodzivirira mvura; simba rakasimba; guruva, anti-kupisa, anti-static, anti-ultraviolet; iyo coefficient yekupisa kwekuwedzera uye kudzvinyirira idiki, yakanaka mhepo inokwenenzverwa, yakanaka ruvara kukasira, yakanaka yemhando kugadzikana, inoyevedza chitarisiko, isiri nyore kusvibiswa, nyore kuchenesa, hapana deformation mushure mekuwacha, yakasimba. Kureba kwesimbi yakasviba fiberglass machira ndeye 30mper roll. Imwe yega roll yakaputirwa mune yakasimba pepa chubhu.
Flame Retardant Washington City Offices Blackout Mucheka 2m Upamhi
Iyo fiberglass nhema nhema jira inogadzirwa ne40% fiberglass uye 60% PVC kuburikidza neakasarudzika maitiro. Iine murazvo unodzora zvinhu zvisingawanikwe mune mamwe machira. Iyo chaiyo fiberglass machira haizove akaremara kana kabhoni nekuti iro remukati mafupa emucheka igirazi fiber mushure mekutsva. Iwo iwo machira echayo pachawo anoona kuti haina kuumbika uye inochengetedza kumeso kwenguva refu. Hapana warpage, kuwedzera uye kudzora <0.5%. Zvakare, hapana chikonzero chekusimbisa, kusatsemuka kwemisodzi, ine yakakosha mhepo kuramba uye mechikari zvimiro zvinomiririra kushandiswa kazhinji.
Yakakwira Hunhu Anti-UV PVC Curtain Fiberglass Kusviba Mucheka
Iyo fiberglass nhema nhema jira inogadzirwa ne40% fiberglass uye 60% PVC kuburikidza neakasarudzika maitiro. Iyo haina adsorb solid solid in the air uye haina kuomerera kuguruva, iyo inogona kunyatso deredza huwandu hwehuruva. Pamusoro pezvo Iyo yakasarudzika mamineral uye haipe hutachiona hwekukura nharaunda. Hutachiona haugone kubereka uye jira harizove rakaumbwa. Inoshandiswa zvakanyanya kunzvimbo dzakasiyana, senge hofisi, hotera, maresitorendi.
Hupamhi hwehupamhi hwatinoita i3m uye ukobvu hwacho hwave kuita 0.38mm. Kureba kwe fiberglass nhema kudzima jira ndeye 30mper roll. Imwe yega roll yakaputirwa mune yakasimba pepa chubhu.
Akakurumbira Hwindo Anopofomadza Washington City Offices Blackout Mucheka
Iyo fiberglass nhema nhema jira inogadzirwa ne40% fiberglass uye 60% PVC kuburikidza neakasarudzika maitiro. Munharaunda yenguva yakareba yezuva, kukasira kwemucheka kwejira kunoda kusvika pane imwe nhanho kudzivirira jira kubva pakupera. Kune zvigadzirwa zvine pachena kushushikana kana tensile zvinodiwa, iyo tensile simba rejira rinoda kutariswa. Semuenzaniso, ultra-yakakwira roller inopofomadza muzvivakwa zveveruzhinji uye machira ematenga ane simba rakasimba rekusimbisa anofanirwa kushandisa machira e fiberglass.
Pasi pemamiriro ezvinhu aya, iyo fiberglass nhema kudzima jira chisarudzo chakaringana, kwete chete inogona kuchengetedza zvakavanzika, asi zvakare nharaunda inoshamwaridzika machira.
Wepamusoro Yemhando PVC Yakapetwa Fiberglass Kudzima magetsi Mucheka weHofisi
Iyo fiberglass nhema kudzima jira inogadzirwa ne fiberglass uye PVC kuburikidza neakasarudzika maitiro. Iyo yemahara yesimbi inorema uye zvinhu zvinokuvadza, yakachengeteka uye eco-inoshamwaridzika, hapana kunhuwa kunoshamisa, hakuna kukuvadza kumuviri wemunhu, kugadzikana kwakanyanya, kwakanaka uye kwakanaka, uye kuenderana kwemavara kwakakodzerawo kushongedzwa kwazvino.
Iyo fiberglass nhema nhema jira inogadzirwa neyechisikigo zvicherwa (quartz, jecha, soda, lime). Inoshandiswa zvakanyanya kunzvimbo dzakasiyana, senge hofisi, hotera, maresitorendi uye imba. Iko kuumbwa kwemicheka ye fiberglass yakasviba ndeye 40% fiberglass uye 60% PVC, nhatu matanda ePVC uye 1 nhete ye fiberglass. Hupamhi hwehupamhi hwatinoita i3m uye ukobvu hwacho hwave kuita 0.38mm. Kureba kwe fiberglass nhema kudzima jira ndeye 30mper roll.
UV Dzivirira Kudzima Magetsi Fiberglass Mucheka 40% Washington City Offices Uye 60% PVC
Girazi faibha inorganic isiri-yesimbi zvinhu zvine kugona kuita uye chikamu chakakosha chemicheka yegirazi yegirazi yegirazi. Izvo zvinosanganisa ndeye silika, alumina, calcium oxide, boron oxide, magnesium oxide, sodium oxide nezvimwe zvakadaro.
Mucheka wekusviba we fiberglass wakagadzirwa nemaminerari echisikigo (quartz, jecha, soda, lime). Inoshandiswa zvakanyanya kunzvimbo dzakasiyana, senge hofisi, hotera, maresitorendi uye imba. Kureba kwesimbi yakasviba fiberglass machira ndeye 30mper roll. Imwe yega roll yakaputirwa mune yakasimba pepa chubhu. Hupamhi hwehupamhi hwatinoita i3m uye ukobvu hwacho hwave kuita 0.38mm.
Vertical inopofomadza Fiberglass Blackout Mucheka Wekumba
Iyo fiberglass nhema kudzima jira inogadzirwa ne fiberglass uye PVC kuburikidza neakasarudzika maitiro. Iyo haina adsorb solid solid in the air uye haina kuomerera kuguruva, iyo inogona kunyatso deredza huwandu hwehuruva. Iyo zvakare inogona zvinobudirira kuvhara zuva uye ultraviolet mwaranzi, iyo inobatsira kune hutano. Inokodzera kumahotera, dzimba dzekugara, dzimba dzekugara dzakakwirira, nzvimbo dzekuzorora, nezvimwe.
Kureba kwe fiberglass nhema kudzima jira ndeye 30mper roll. Imwe yega roll yakaputirwa mune yakasimba pepa chubhu. Hupamhi hwehupamhi hwatinoita i3m. Uye iyo ukobvu inenge 0.38mm.
Isina mvura Yekunze Roller inopofumadza Fiberglass Blackout Fabric
Iyo fiberglass nhema nhema jira inogadzirwa ne40% fiberglass uye 60% PVC kuburikidza neakasarudzika maitiro. Inoshandiswa zvakanyanya muhupenyu hwedu. Semuenzaniso, chivakwa cheveruzhinji (jimunasiyamu, horo yemitambo, nhandare yendege, nzvimbo yekuratidzira), chivakwa chehofisi, hotera (resitorendi, imba yevaeni, jimi, imba yekusangana) uye imba (yekurara, yekudzidzira, imba yekutandarira, imba yekugezera, kicheni, sun room , mhanza). Iyo inoumbwa nematatu matatu PVC uye 1 dura re fiberglass.
Isina Mvura Fiberglass Kusviba Mucheka WeHofisi
Iyo fiberglass nhema nhema jira inogadzirwa ne40% fiberglass uye 60% PVC kuburikidza neakasarudzika maitiro. Iine murazvo unodzora zvinhu zvisingawanikwe mune mamwe machira. Iyo chaiyo fiberglass machira haizove akaremara kana kabhoni nekuti iro remukati mafupa emucheka igirazi fiber mushure mekutsva. Inoshandiswa zvakanyanya muhupenyu hwedu. Semuenzaniso, chivakwa cheveruzhinji, chivakwa chehofisi, hotera uye imba.
Iyo fiberglass nhema kudzima jira rakaumbwa nematatu matatu PVC uye 1 dura re fiberglass. Iyo yakanyanya upamhi yatinogadzira ndeye 3m. Uye iyo ukobvu inenge 0.38mm. Kune anopfuura zana nemazana emarudzi emavara anowanikwa kune anopofumadza vagadziri Iyo kureba kwe fiberglass nhema magetsi jira ndeye 30mper roll. Imwe yega roll yakaputirwa mune yakasimba pepa chubhu.
Mvura isina Mvura Fiberglass Roller inopofumadza kudzima magetsi Mucheka 3m Upamhi